Top 5 Mix Rags Jumlo ee Belarus oo leh qiimaha warshadda
Posted on Waxaa laga yaabaa 9, 2022 Waxaa laga yaabaa 9, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 USA Dib-u-warshadaynta Dharka-Dharka-isku-dhafka Rags Jumlo ee Belarus
3 DHARKA LA ISTICMAALAY TAIB
4 AMK OUARDANI RECUPERACIONES DUWAN
5 Shirkadda SHC Textiles Ltd
6 Isku qas Wariyaasha Jumlada ee Belarus Gabagabada
Jumlo badan oo calal ah oo isku dhafan oo ku yaal Belarus, laakiin dhammaantood ma bixiyaan alaab iyo adeegyo tayo isku mid ah. Way adkaan kartaa in la ogaado midka aad dooranayso, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay suuqa. Waxaan diyaarinay liiska 5-ta ugu sarreeya ee jumlo-iibiyeyaasha isku-dhafka ah ee Belarus iyadoo ku saleysan khibradeena iyo cilmi-baarista warshadaha. Waxaan rajeyneynaa in tani ay kaa caawin doonto in go'aankaaga uu fududeeyo. Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Hissen waxa uu leeyahay silsilad sahay oo awood badan, taas oo ka dhigaysa inay xukumaan booska muhiimka ah ee suuqa gacan labaad. Waxay leeyihiin shabakad aad u ballaaran oo loogu talagalay bixinta alaabta asalka ah. Alaabooyinku waxay ka yimaadaan magaalooyinka Shiinaha, sida Beijing, Guangzhou, iyo Shanghai.
Shirkaddu waxay bixisaa masaxadaha warshadaha iyo maryaha, sida maryaha denimka, maryaha wax lagu masaxo, iyo maryaha suufka lagu masaxo.
Waxay siinaysaa meel adag oo suuqa ah waxayna u ogolaataa inay bixiyaan noocyo kala duwan oo dhar ah oo la isticmaalo macaamiishooda. Natiijo ahaan, waxay xukumi karaan booska muhiimka ah ee suuqa gacan labaad.
USA Dib-u-warshadaynta Dharka-Dharka-isku-dhafka Rags Jumlo ee Belarus
USA Recycling Textile waa iibiye la isticmaalay oo bixiya dhar la isticmaalay iyo calal warshadeed. Sida jumlo iibiye dhar-gacan labaad ah, waxay macaamiishooda ku siin karaan dhar la isticmaalay oo tayo leh qiimo jaban.
Dharkooda la isticmaalay ayaa laga keenay meelo kala duwan, iyagoo hubinaya in macaamiishooda ay awoodi doonaan inay helaan ku habboon baahi kasta.
Dharka la isticmaalo ka sokow, Dharka Dib-u-warshadaynta ee USA waxa kale oo ay bixisaa calal warshadeed, kuwaasna waxa loo isticmaali karaa arrimo kala duwan, sida nadiifinta meelaha daadsan ama tirtiridda mishiinnada. Maraqyada warshadaha waxa kale oo loo isticmaali karaa dahaadh ahaan ama sheyga ilaalinta codka.
Sida dharka la isticmaalay & alaab-qeybiyaha calal-warshadeed, USA Dib-u-warshadaynta Dharka waxay u heellan tahay inay siiso macaamiisheeda alaabada iyo adeegyada ugu macquulsan.
DHARKA LA ISTICMAALAY TAIB
Shirkadda Taib ee la isticmaalay waxay ku takhasustay dib-u-warshadaynta iyo jumladaynta dharka la isticmaalay, iyo tirtirayaasha marada, oo ku yaal Cocentaina, Spain. Shirkaddu waxay leedahay 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan goobta. Waxay hayaan dhar badan oo la isticmaalay oo loogu talagalay ragga, haweenka, iyo carruurta da' kasta iyo cabbir kasta.
Shirkaddu waxa kale oo ay sidataa maro-masaxadaha marada ee kala duwan ee la isticmaalo, kuwaas oo ku habboon in la nadiifiyo wax kasta oo daadanaya. Dharka la isticmaalay ee Taib ee la isticmaalay iyo maryaha wax lagu masaxo ayaa lagu heli karaa qiimo jumlo, taasoo ka dhigaysa qiimo aad u wanaagsan lacagtaada.
La xidhiidh maanta haddii aad xiisaynayso iibsashada dharka la isticmaalay ama masaxadaha marada. Waxay rajayn doonaan inay kula ganacsadaan.
AMK OUARDANI RECUPERACIONES DUWAN
AMK OUARDANI RECUPERACIONES TEXTILES waxay ku hawlan tahay iibinta & dhoofinta noocyada kala duwan ee dharka la isticmaalay. Suuqyadooda aasaasiga ah waa Afrika, Aasiya, iyo Yurubta Bari. Shirkadu waxay kaliya bixisaa tiro badan oo ah dhar la isticmaalay iyo maryo cadcad oo loogu talagalay ujeedooyinka nadiifinta.
Dharka AMK ee la isticmaalo waxaa laga keenaa meelo kala duwan, sida deeqaha gaarka ah, dukaamada samafalka, iyo wax iibsiga badan ee goobaha ganacsiga.
Shirkaddu waxay kala saartaa oo kala saartaa dharka ka hor inta aysan u dhoofin ganacsatadooda caalamiga ah.
Sidan, AMK OUARDANI RECUPERACIONES TEXTILES waxay siisaa adeeg muhiim ah waddamo badan oo adduunka ah.
Shirkadda SHC Textiles Ltd
SHC Textiles Ltd. waa urur ganacsi oo siiya dharka la isticmaalay iyo maraqa suufka warshadaha. Ganacsigooda jumlada ah ee gacan labaad waxa ay ku faafeen aagga Bari, waxayna leeyihiin in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah warshadaha.
Shirkadda waxaa ka go'an inay bixiso alaabo tayo leh iyo adeeg macaamiil oo heer sare ah. STT waxay bixisaa dhar aad u kala duwan oo la isticmaalo, oo ay ku jiraan shaararka, dharka, jaakadaha, iyo kuwo kale. Waxay kaloo bixiyaan maro suuf cad oo nadiifin ah oo ku habboon ujeedooyinka ganacsiga.
Alaabooyinkoodu waa kuwa ugu tayada sarreeya, adeeggooda macaamiishuna waa mid aad u wanaagsan.
Isku qas Wariyaasha Jumlada ee Belarus Gabagabada
Haddii aad raadinayso meel la isku halayn karo oo la awoodi karo oo sahay nadiifin ah oo jumlo ah, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto mid ka mid ah shanta ugu sarreeya ee Belarus ee calal-jareyaasha. Dhammaan shirkadahani waxay khibrad dheer u leeyihiin warshadaha waxayna ku siin karaan alaab tayo sare leh oo qiimo tartan leh. Markaad dooranayso alaab-qeybiye, hubi inaad tixgeliso qodobbada sida qiimaha, tayada, wakhtiga bixinta, iyo adeegga macaamiisha. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu ahaa mid waxtar leh, oo aan kuu rajeyneyno nasiib wacan si aad u hesho alaab-qeybiye ku habboon baahiyahaaga ganacsi.
Views Views: 28
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta Sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Belarus.